EasyJet CEO anozvitaurira sezvazviri
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » EasyJet CEO anozvitaurira sezvazviri
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Interviews • Investments • nhau • vanhu • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kana bhuru ramira pano, uye iwe uripano, unobata sei chinhu chine hutsinye senge COVID-19 nezvose zvayakanakira yendege yako yanga ichiitika kwerinopfuura gore izvozvi?
Iine ikozvino kota pa10% yemazana ezvigaro zve2019, iyo CEO inoona sei mwedzi inouya nekota?
Kurambidzwa nendege zvinoita kuti zvivhiringidze vatengi kune rumwe rutivi uye zvinonetsa zvikuru kune vanoshanda kuti vashande munzvimbo inoyeuchidza zviri kure nezve chero zvakajairwa.
Hurumende ichibuda nehurongwa hwekuti vangasunungure sei zvirambidzo, Lundgren anoti vanogona kutarisira zhizha rakanaka nekuti uyu hausi mubvunzo nezve kudiwa; izvi zvese ndezvezvirambidzo zviripo.
Mubvunzurudzo naJohan Lundgren, EasyJet CEO, Jonathan Wober weCAPA Live anobvunzurudza mukuru wezve mamiriro ezvinhu pari zvino pasi rese achitarisana neCOVID-19 uye mhedzisiro yayave nayo muindasitiri yendege zvachose uye paJetJet kunyanya .
Mangwanani akanaka. Ndiwo mufaro wangu mukuru kugamuchira mukuru mukuru we nyoreJet, Johan Lundgren, uyo akapinda mukambani iyi, ndinofunga, makore matatu apfuura izvozvi. Inguvai yawakafanirwa kusangana naJohan. Ndiri kungotanga nekutanga nekubvunza mubvunzo mudiki-we-kumadziro. Ndakaverenga, sekutsvaga kwangu, iwe wakatanga hupenyu setrombonist, saka ndinofungidzira iwe wakachinjisa imwe mhando yesimbi chubhu kune imwe. Ini ndanga ndichinetseka kana paine chero kukosha kwese mune iro rekutanga basa kune rako basa mukufamba.
Oo, iwo mubvunzo wakanaka. Handina kumbova nazvo. Pane here kukosha kune… Kwete, ndinofunga kuti ndakanga ndakatsunga kubva pazera diki kuti ndaida kuzoita solo trombonist, uye hapana munhu akandiudza chaizvo nezve chokwadi chekuti hapana zvakawanda zvinodiwa kunze uko trombone soloists, saka kudiwa uye kupihwa, chaive chisiri chinhu chandaive ndakanyatso kuziviswa nezvazvo, uye tarisa, ini ndakanga ndisina tarenda rakaringana. Ipapo, ndakafunga kuenda mukufamba nekuti ndinoda kufamba, uye ndinoda vanhu, saka zvakanzwika kwandiri kunge zano rakakura. Ipapo, ndakazvishandira pachangu munzvimbo dzakasiyana munzvimbo yeindasitiri yekufambisa neyekugamuchira vaeni, hwave hupenyu hwangu hwese hwekushanda izvozvi.
Hongu. Ini ndinofungidzira kudiwa kweye solo trombonist ichiri yakatodzika pane kudiwa kwekufamba nendege, kunyangwe ichishungurudzika zvakanyanya, parizvino. Kutisvitsa pakufamba nendege, kungoziva zvishoma nezve ako azvino mazinga ebasa, iwe wati, nguva pfupi yadarika, kuti ikozvino kota ndeye 10% yemazana echigaro e2019. Ikota yaDecember, ndinofunga, iwe wanga uri padhuze ne18% yemazinga echigaro e2019 uye chete 13% yenhamba dzevatakurwi. Neiyi gumi muzana yehukuru hwauinayo mukota yazvino, ndeupi mwero wevatakuri waunotarisira? Zvino, zvakanyanya kukosha, ndinofunga, nekuti munhu wese anoziva kuti tiri mune yekuvhara, unoiona sei ichifambira mberi mumwedzi inouya nekota?
Hongu, wakarurama. Ndiri kureva, tiri kuti isu hatifungidzirwe kubhururuka zvinopfuura gumi muzana mukota yatiri isu tichienzaniswa nematanho e10. Iyo nyaya iri, zvakadaro, kuti iyo yekufunga manzwiro, zvakanyanya zvakanyanya zvichienderana nerezuva nezuva kutenderera kwenhau. Zvakare, zvakare, chikuru chinhu ikozvino chatinacho ndechechokwadi, zvirambidzo zviripo kudzora denda. Rimwe rematambudziko anosangana nemunhu wese paunenge uri muindasitiri iyi inyaya yekuti zvirambidzo izvi zvinotaridzika zvakasiyana zvichienderana nedanho, izvo zvinoita kuti zvinyanye kuvhiringidza vatengi vedu kune rumwe rutivi uye zvinonetsa zvikuru kune vanoshanda kuti vashande mukati. chero chinhu chinokuyeuchidza nezve zvakajairika mamiriro.
Nekudaro, isu tinofanirwa kushanduka zvakanyanya maererano nehurongwa hwekugona kwedu, asi mavhoriyamu akanyanya, mashoma, uye mavhoriyamu aripo anonyanya kubhururuka mudzimba. Kune mashoma kwazvo epasi rese anobhururuka ipapo pakutanga. Hatina kufungidzira kuti kuchave nekuwanda kwekubhururuka mukota ino patakaona kwaiitika izvi pamberi peKisimusi, asi chakanyanya kukosha ikozvino ndechekuti hurumende inobuda nehurongwa hwekuti vachaenda sei zorora izvi zviripo zviripo, saka tinogona kutarisira zhizha rakanaka nekuti tinoziva kuti pane chiri kudiwa kunze uko. Uyu hausi mubvunzo nezve kudiwa. Izvi zvese ndezvezvirambidzo zviripo. Ndizvozvo, hongu, mhedzisiro yedenda, iro isu tinonzwisisa zvizere ndiro rekutanga uye rinotungamira pane zvakakosha pano.
Eurocontrol, maneja maneja, achangobva kuburitsa zviitiko zve traffic zvichiratidza kuti, kunyangwe muna Chikumi, traffic maererano nenhamba dzendege, asi hazvisi izvo zvakasiyana nekuisa manhamba, zvingave zvakadzika nepakati pe55% uye 70% pamatanho e2019 kunyangwe munaJune. Kana isu tichiri kutaura nezve dzakadzikira dzendege padanho iro, ndinoreva, iwe unozviona kupi zvichitevera June? Tiri kuzodzokera ku… Hatisi kuzodzokera ku2019, asi iwe unofunga kuti ungadzokera kupi mune yakanyanya-kesi mamiriro?
Tarisa, ndinofunga kuti kune akati wandei mamiriro kunze uko, asi ngatinyatso kujekesa. Hapana anoziva. Hapana anoziva kana zvichazove zvakanyanya kana zvishoma pane mamwe ematanho iwe auri kutaura. Ehe, zvinonakidza kutarisa mamiriro, uye mamwe acho akavakirwa pane zvimwe zvekufungidzira zvinogona kunge zviri zvechokwadi, asi chokwadi ndechekuti izvi zvinogona kuchinja mumavhiki mashoma 'nguva. Kana iko kuri kuenderera kwekubudirira kuburitswa kwechirongwa chekubaya nhomba, kuri kutanga kuve nemhedzisiro iri nani pane zvingafungidzirwa, zvirambidzo zvinogona kusimudzwa kare. Zvino, ndinofunga zvichaenda ku… zvinogona kunyatso fadza pakufamba nekuti ndizvo zvisungo, pent-up yekuda iri kunze uko, asi chinhu ndechekuti hapana anoziva kuti kunyange izvi zvichataridzika sei munguva yevhiki, usambo funga kuti izvi zvichavei muna Chikumi.
Asi ini ndine tariro yezhizha rakasimba kana zvirongwa zvekudzivirira zvirikubudirira, kana zvichishanda pamisiyano, kana zvikashanda pamushanduko uripo kunze uko, saka tinoziva kuti pane kudiwa kukuru kwekukurumidza kwehurumende kuti isunungure zvirambidzo izvi. . Ziva iwe, zvakare, kuti kune dzakawanda, nyika zhinji kunze uko dzinovimba zvakanyanya nekushanya, saka ichi ndicho chimwe chezvinhu zvekutanga zvavanazvo nenzira yakachengeteka yekubhururuka uye kufamba kuenda zvekare. Ini ndinofunga tinogona kushamisika chaizvo kana paine kuenderera kwakanaka kwechirongwa chejekiseni.
Zvakanaka, ndinofungidzira mari yemativi maviri kune vanhu vakaita sewe, nekuti uri Pan-European, unoshanda munyika zhinji, asi saka une mukana wakawanda kupfuura ndege dzendege dzakanangana chaizvo nekubhururuka kunze kwenyika imwe, asi iwe zvakare inofanirwa kutarisana nedanho rakakura rekusava nechokwadi mumaonero ehurumende dzakasiyana pane izvi zvese. Mitemo yekufamba haina kumbobvira yanyatso rongedzwa zvachose. Kufambira mberi kwekudzivirira kuri pane imwe nguva yakatarwa munyika dzakasiyana, uye kunyangwe iwe ukaita fambiro mberi huru nekubaiwa, nyika dzinogona kusarudza kuchengeta zvirambidzo zvekufamba nekuti dzimwe nyika hadzina kufambira mberi zvakafanana Iwe unotanga sei kuronga network yako mumhando yakadaro yemamiriro?
Zvakanaka, tinoziva kuti, semuenzaniso, kana paine misiyano mikuru pakati penyika, uye pachave nezvirambidzo zvakaomarara uye zvakaoma mune imwe nyika kubva kune imwe, runako rwekuva nendege iri, chaizvo, unogona kufambisa zvinhu zvako. Unogona kubhururuka uchienda kunzvimbo dzakasiyana. Unogona kubhururuka uchienda uko kudiwa kuri. Ini ndinofunga zvakanaka kutaura kuti zvekutanga zvinoratidza kudiwa kwatiri kuona kwezhizha kuri munzvimbo hombe, dzechivanhu nzvimbo dzekuzorora, uko vanhu vanoziva kuti kune zvivakwa zviripo zvichingodaro, asi kana miganho yenyika iri kuvharwa , zvakanaka, zvino zvichave zvakanyanya kutarisisa kune epamba, semuenzaniso. Ndiri kureva, kamwechete mune zvese, iwe waigona kuona… Sezvandareva, mamiriro.
Izvo hazvireve kuti zvimwe zvingangoitika ndezvekuti iwe unogona kuona yakanyanya, yakasimba kwazvo imba inobhururuka. Kana iwe uri kutarisa izvo zvatatoita nhasi, kunze kweiyo gumi muzana, uye kusvika gumi muzana yatakataura nezvayo mukota, izvo zvinonyanya kuve UK yekumba, France yekumba, uye yekumba muItari. Zvishoma kwazvo zvinoenda kune dzimwe nyika. Ehezve, kana imwe nyika ikanzwa kuti ivo vava kutonga izvi asi ikafunga kuva nezvirambidzo kubva mukufamba kwenyika, hazvo, izvo zvinoratidzwa muchirongwa. Nekudaro, takaita dzinoverengeka zvezviitiko izvi, uye isu tinoda kumirira chero bedzi isu patinogona isu tisati tatanga kuvashandisa, nekuvaisa pakutengesa, nekupinza vashandi mukati, uye kutanga kutarisa kugona nekupesana neicho chinodikanwa se chero bedzi isu tichigona kuwana ruzivo rwechizvino-zvino kune zvinorambidzwa nekuti ndizvo zvirambidzo zviri chaizvo, chaizvo kiyi pano
Page 1 pamusoro 5 Prev Next